Pouches guzoro ọtọ
Akpa akpa gusset
Mpempe akwụkwọ mkpọchi uwe
Obere akpa Ohiri isi
Akwụkwọ akpa ego agbadoro n'akụkụ
Akpa akpa akara atọ
Akpa akpa dị ala
Akwụkwọ akpa ego dijitalụ
Enweghị ụgwọ nke efere ma ọ bụ cylinders, mbipụta dijitalụ bụ nnukwu nhọrọ maka ọrụ obere oge na ọtụtụ SKU. Teknụzụ obibi akwụkwọ dijitalụ n'onwe ya nwere njirimara nke arụmọrụ ibipụta ngwa ngwa, ezigbo mma, mkpebi dị elu na ọrụ dị mma, ụlọ ọrụ na -ebi akwụkwọ na -akwado ya.
100% akpa akpa a na -emegharị emegharị
Maka ndị ahịa na-achọ nkwakọ ngwaahịa nwere ike imegharị, anyị na-enye obere akpa a na-emegharị emegharị emere site na otu ihe, 100% polyethylene (PE). Akpa akpa ndị ahụ bụ nke PE abụọ nwere ike megharịa 100% dị ka ngwaahịa 4 LDPE ngwaahịa. Ihe niile dị na akpa anyị nwere ike imegharị, akpa, zippers na spouts, bụ otu ihe, polypropylene.
Akpa akpa a na -eme dị ka nhọrọ nchekwa dị mma maka mkpesa ika. Ha dị ezigbo mma ma dị mfe iji. N'iji teknụzụ nrụpụta na ibipụta ọkwa dị elu, obere akpa anyị nwere ike ịhazi ụdị ngwaahịa ọ bụla kacha mma n'ụdị agba na nha.
Enweghị ụgwọ nke efere ma ọ bụ cylinders, mbipụta dijitalụ bụ nnukwu nhọrọ maka obere oge oru ngo na ọtụtụ SKUs. Teknụzụ obibi akwụkwọ dijitalụ n'onwe ya nwere njirimara nke arụmọrụ ibipụta ngwa ngwa, ezigbo mma, mkpebi dị elu na ọrụ dị mma, ụlọ ọrụ na -ebi akwụkwọ na -akwado ya.
Nkwakọ ngwaahịa agụụ bụ ụzọ nkwakọba nke na -ewepụ ikuku na ngwugwu tupu emechie ya. Ebumnuche nkwakọ ngwaahịa agụụ na -abụkarị iwepu ikuku oxygen n'ime akpa ahụ iji gbatịkwuo ndụ nri, yana ịnabata ụdị nkwakọ ngwaahịa na -agbanwe agbanwe iji belata ọdịnaya na olu nkwakọ ngwaahịa ahụ.
Obere akwa ohiri isi bụ otu n'ime ụdị ọdịnala kacha amasị na nkwakọ ngwaahịa na -agbanwe agbanwe, ejirila ya mee ụdị ngwaahịa dị iche iche. a na -ahapụkarị akụkụ maka imeju ọdịnaya.
Akpa akpa nwere akụkụ nwere gussets n'akụkụ abụọ dị n'akụkụ akpa akpa, na -ebuli ikike nchekwa, bụ nnukwu nhọrọ maka ịkwakọ ngwaahịa buru ibu. E wezụga nke ahụ, ụdị obere akpa ndị a na -ewe obere ohere ebe ha ka na -enyekwa ohere akwa kwaaji maka igosipụta na ire ahịa akara gị. Site na njirimara nke ọnụ ahịa nrụpụta dịtụ ntakịrị, ndụ nchekwa anya na ọnụ ahịa ịzụrụ asọmpi, obere akpa gusset bụ akụkụ dị mkpa na ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa na-agbanwe agbanwe.
Akpa akpa gusset bụ akpa ndị kwụ ọtọ na-ejikarị. A na -ahụ gussets ala na ala akpa akpa na -agbanwe. E kewara ha ọzọ na ala ịkọ ubi, akara K, na gussets okpuru ala. A na-agbanwe obere akpa K-Akara na Plow Bottom gusset site na obere akpa gusset iji nweta ike karịa.
Akpa akpa dị larịị bụ ọkacha mmasị ọhụrụ nke ụlọ nkwakọ ngwaahịa nri, na -ewuwanye ewu. Ha nwere ọtụtụ aha, dị ka akpa akpa, akpa akpa, akpa brik, akpa ala okpuru ala, wdg. Ha bụ akụkụ 5, na-akwalite mkpesa shelf na ogwe ise nke mpaghara a na-ebipụta ebipụta iji gosipụta ngwaahịa ma ọ bụ akara gị nke ọma. E wezụga nke ahụ, obere akpa igbe na -akwụsikwa ike na shelves ma ọ dị mfe ịkpakọba na -enye ma ndị na -ere ahịa na ndị na -ere ahịa mma, nke ga -eme ka asọmpi ahịa dị mma, ma na -enye aka na -ewu ngwaahịa ngwaahịa na mgbasa ozi.
Ihe nkiri Rollstock na -ezo aka na fim nkwakọ ngwaahịa ọ bụla edoziri edoziri n'ụdị mpempe akwụkwọ. Ọ dị ọnụ ala yana ọ dabara maka ngwa ngwa yana ngwa ahịa. Anyị na-enye ngwaahịa ihe nkiri mpịakọta ngwaahịa dị elu nwere oke nha, ihe na laminations maka ụdị ngwaahịa ọ bụla iji na-arụ ọrụ n'ụdị kwụ ọtọ ma ọ bụ kehoraizin mejupụta ma mechie igwe akpa.
Ọ dị mfe imeghe ma dị mfe imechi, zippers na-emechi bụ nhọrọ dị mma, nke na-akwụghachi ụgwọ/nke enwere ike ị nweta maka ọtụtụ ụdị akpa akpa na-agbanwe agbanwe, gụnyere ma obere akpa na obere akpa dị larịị, dị irè iji gbochie mmetọ ma ọ bụ mfufu. na maka ichekwa ịdị ọhụrụ ngwaahịa.
Akpa akpa akara atọ dị n'akụkụ, nke a makwaara dị ka obere akpa ego, ka emechiri emechi n'akụkụ abụọ na ala, a na -ahapụkwa elu ya maka imeju ọdịnaya. Ụdị obere akpa a bụ obere akpa dị ọnụ ala, ọ bụghị naanị na ọ dị mfe imeju ngwaahịa kamakwa ọ na-erepịakwa ihe ndị ọzọ. Ọ bụ nhọrọ zuru oke maka ọrụ dị mfe, na -alụbeghị di ma ọ bụ nwunye, nri mbata ma ọ bụ ngwaahịa nha iji were dị ka inye onyinye. Akpa akpa dị larịị bụkwa nhọrọ a ma ama maka nkwakọ ngwaahịa oghere na nkwakọ ngwaahịa nri oyi.
Linyi Guoshengli Ihe Nkwakọ ngwaahịa Co., Ltd.